Nendlela ehlisa iOS 8 beta ku-iOS 7.1.1
Apple ezikhishwe iOS 8 beta kuya Onjiniyela. Mhlawumbe ozifakile it, kodwa wakuthola nawo ikalishi ukuthi awukwazi ume. Khona Ufuna emuva uye ku-iOS 7.1.1. Empeleni, downgrading kusuka iOS 8 ku-iOS 7 Kulula kakhulu. Landela nje lezi ziqondiso.
Uyothola ulahlekelwe yonke idatha yakho
Ngaphambi ekuqaleni, udinga ukwazi ukuthi uzolahlekelwa yiyo yonke idatha yakho kusuka iOS 8 futhi awukwazi ukubuyisela idivayisi yakho kusukela iOS 8 isipele on iOS 7. Lokho kusho uma i iOS kuphela 8 isipele, ungeke ukuyisebenzisa ukubuyisela idivayisi yakho emva downgrading. Kodwa uma i osekhulile ICLOUD noma iTunes isipele kusuka iOS 7, uzokwazi ukubuyisela kukho. Ngakho sicela uqinisekise ukuthi unayo ukusekela ngokulondoloza idatha yakho ezibalulekile ne iTunes noma ICLOUD.
1. Download the properiOS 7.1.1 IPSW ifayela firmware for idivayisi yakho lapha.
2. Xhuma idivayisi yakho kwikhompyutha yakho bese bethula version yakamuva ye iTunes.
3 Cindezela ukhiye Shift (on Windows) bese uchofoze inkinobho Buyisela, kuyilapho abasebenzisi Mac ubambe Alt noma Option Ikhi.
4. Ayisebenzise bese ukhetha iOS 7.1.1 IPSW ifayela firmware wena ukulandwa phambilini bese uchofoze inkinobho 'Open'.
5. Manje idivaysi yakho izoba Buyisela iOS 7.1.1. I buyisela Inqubo kungathatha mayelana 10-15 imizuzu. Kanye ligcwaliswe, idivayisi yakho sizokwehliselwa kusuka iOS 8 beta ku-iOS 7.
6. Uma une iOS 7 isipele, Manje ungayibuyisela idivayisi yakho kuwo.
1. Apple uye wavala iwindi ukusayina nganoma yisiphi firmware ngezansi iOS 7.1.1. Ngakho akunakwenzeka ukuba babuyele iOS 7.0.6 noma ngezansi, iOS kuphela 7.1.1.
2. Uma jailbroken bese uthuthukele iOS 8 beta, uyolahlekelwa jailbreak yakho. Uma ufuna jailbreak emva downgrading, ungase ufune ukufunda lezi: Nendlela jailbreak iOS 7.1.1 nge Pangu on Windows noma Mac.
Posted on July 9, 2014 May 9, 2015 Umbhali Izigaba Amathiphu & NamaqhingaAmathegi liyabehlisa, Ehlisa iOS 8 ku-iOS 7.1, iOS 7.1, iOS 8
Langaphambilini post Previous: Nendlela Jailbreak iOS 7.1.x ne Pangu on Mac OS X
Next post Next: Indlela ukuguqula i-DVD ukuze MP4 yohlelo